Qodobadda ka soo baxay Shirka Golaha Wasiirada Dowladda Puntland.
March 19, 2020 - Written by Editor
Garoowe:-Shirka Golaha Wasiirada Dowladda Puntland oo uu Shir-guddoomiyey Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, oo uu weheliyo Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxaa todobaadkan looga hadlay Amniga, ka jawaabista baaqyada iyo soojeedintii Shirweynaha Wadatashiga Puntland ee kusoo baxay War-murtiyeedkii Shirka Wadatashi iyo Caabuqa Coronovirus.
Kulanka Golaha Wasiirada ee Dowladda Puntland waxaa maanta ka qeybgalay Guddoomiyeyaasha Gobolada iyo Degmooyinka Puntland, waxaana Goluhu uu ka jawaabay baaqii kasoo baxay Shirweynaha Wadatashiga Puntland.
* Goluhu wuxuu Ayiday War-murtiyeedkii kasoo baxay Shirkii Wadatashiga Puntland, waxaana la isla qaatay in la fuliyo dhammaan baaqyadii iyo talooyinkii kasoo baxay Shirweynaha Wadatashiga Puntland.
* Iyadoo laga duulayo Baaqii kasoo baxay Shirka Wadatashiga ee ku saabsana in Puntland doorkeeda qaadato, si Soomaaliya uga gudubto marxalada Siyaasadeed ee jirta.
Sidoo kale, Goluhu waxaa uu u mahadceliyey guddiyadii iyo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay qabsoomida Shirka Wadatashiga Puntland, si gaar ah waxaa loogu mahadceliyey Ciidamada Amniga, Jaamacadda PSU, Warbaahinta, Kooxaha farsamada iyo cidkasta oo door ka qaadatay in uu Shirkaasi guuleysto.